China L-Phenylalanine CAS 63-91-2 maka ndị na-emepụta Pharma Grade (USP) | Ekele
Aha ngwaahịa ：: L-Phenylalanine
L-Phenylalanine (Abbreviated Phe) bụ amino acid dị mkpa na ọ bụ naanị ụdị phenylalanine dị na protein. Ọ bụ otu n’ime amino acid iri na asatọ, na otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa na ahụ mmadụ.
Dika ihe oriri na-edozi ahụ ， L-phenylalanine nwere ike ile anya dị ka otu benzyl nke a gbanwere maka otu methyl nke alanine, ma ọ bụ otu phenyl nọ n'ọnọdụ hydrogen nke alanine. Ọtụtụ n'ime ahụ site na phenylalanine hydroxylase catalysis oxidation n'ime tyrosine, na sịntetik na tyrosine dị mkpa neurotransmitters na homonụ, iji kere òkè na ahụ metabolism nke shuga na abụba metabolism.
L-phenylalanine bụ bioactive aromatic amino acid. O bu amino acid di nkpa nke mmadu na umu anumanu gha emeghi nke oma. Ọ dị mkpa maka mmadụ iri 2.2g L-phenylalanine kwa ụbọchị. Dị ka otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa maka ahụ mmadụ, a na-eji ya arụ ọrụ na ọgwụ na ngwa mgbakwunye nri. Ọ bụ ihe dị mkpa nke ọgwụ amino acid. Na ụlọ ọrụ nhazi nri, L-phenylalanine nwere ike tinye ya na nri achicha. Na nri nke phenylalanine nwere ike ịbawanye ụba na site na amido-carboxylation na glucide.
L-phenylalanine nwere ike ịme ka nri na-esi isi ụtọ ma mee ka amino acid dị mkpa. Na ụlọ ọrụ ọgwụ, a na-eji L-phenylalanine mee ihe dị ka etiti nke ụfọdụ amino anticancer pharmaceuticals dị ka formylmerphalanum na wdg. A na-ejikwa ya emepụta adrenalin, thyroxin na melanin. Ngwa ọzọ dị mkpa bụ iji synthesize aspartame na L-aspartic acid.
L - phenylalanine bụ isi ihe dị mkpa nke mgbakwunye nri dị mkpa - sweet Aspartame (Aspartame). Dịka otu amino acid dị mkpa na ahụ, a na-ejikarị L-phenylalanine eme ihe maka ịmịnye amino acid na ọgwụ amino acid na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Cristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ
-32,7 Celsius ~ -34,7 Celsius
Nke gara aga: L-Leucine CAS 61-90-5 Maka Nri Nri (AJI USP)
Osote: L-valine CAS 72-18-4 maka Ọgwụ Pharm (USP)
Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Threonine Pharm ọkwa, L-Threonine Nri Nri, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine,